MZB FAMILY - Page 748 of 860 - Online Daily
ပရိသတ်တွေက ခေးလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြော်ငြာနဲ့ သီချင်း MV တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးက ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းက ဒါရိုက်တာပွင့်သိင်္ဂီဇော်ရိုက်ကူးတဲ့ “ရွှေဖူးစာလေး ချာချာလည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်ရင်း အခြေချနေထိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နည်းပါးပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးကို စွဲစွဲမြဲမြဲအားပေးနေကြဆဲ ဖြစ်တာကို …
အဆုံး စွန် ထိ ပေးဆပ်သူကြီး ရဲ့ ပြော စမှတ် တွင် ခဲ့ တဲ့ ဇာတ်လ မ်း တစ်ပုဒ်… ( လေးစားလွန်း လို့ ကြက်သီး ထမိတယ် ..)
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်း ရုံးရေး ကာလ ကော့မှူးမြို့နယ် ကျိုက်ထော်ကျေးရွာ မှာ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့မဲဆွယ်ဟောပြောပွဲလု ပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ ပရိတ်သတ်တွေ တစ်အားများနေတော့ အန်တီက အိမ်ထဲ မ ဝင်တော့ဘဲ ကားခေါင်မိုးပေါ် ကိုဆွေ့ကနဲတက်ပြီး လူထုကိုနှု တ်ဆက်တော့ ကိုစိုးဝင်းလည်း ကလည်း အမြန်လိုက် တက်ပြီး အန်တီကို ကာကွယ်ဖို့ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေရှာတဲ့ အခါ …
ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား မင်္ဂလာပွဲမှာ ဟင်းတွေအများကြီးစားလို့ပြောရာမှ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦး(ရုပ်သံ)
မလေးရှားလူမျိုးတွေ ၊ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေ အတွက်ကတော့ Rendang ဆိုတဲ့ အမဲသားဟင်းပွဲတစ်မျိုးက မကြိုက်တဲ့သူမရှိလောက်အောင်ပါပဲ ။အဲ့လိုဟင်းပွဲမျိုးကြောင့် ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကတော့ မဆန်းပါဘူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက မင်္ဂဆောင်ပွဲရဲ့ဘူဖေးတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က Rendang ဟင်းပွဲကို အမြောက်အများယူလွန်းလို့ ပွဲလာဧည့်သည်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရန်ဖြစ်စကားများကြတဲ့ Video တစ်ခုကို Twitter အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ် ။ Video ထဲမှာတော့ အစိမ်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဘူဖေးယူတဲ့စားပွဲခုံမှာရပ်နေရင်း …
စိတျကူးထဲမှာ နတေိုးနဲ့ ရုပျရှငျရိုကျနတေယျဆိုတဲ့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့သမီးလေး ရှနျးရှနျး
ပရဟိတမငျးသမီးတဈလကျအဖွဈ ပရိသတျတှအေခဈြပိုနရေတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ခိုငျနှငျးဝရေငျသှေးလေးမြားဂဟောကနတေဆငျ့ မိဘမဲ့ကလေးငယျတှကေို ရငျအုပျမကှာစောငျ့ရှောကျပေးနသေလို သမီးလေးရှနျးရှနျးကိုလညျး သမီးအရငျးသဖှယျ အခဈြပိုကာ စောငျ့ရှောကျပေးနသေူပါ။ မကွာခဏဆိုသလို ခဈြဖို့ကောငျးပွီး သှကျလှနျးတဲ့သမီးလေးရှနျးရှနျးအကွောငျးကို မြှဝလေရှေိ့ပွီး ဒီနမှေ့ာလညျး စိတျကူးထဲရုပျရှငျရိုကျနတေဲ့ ရှနျးရှနျးရဲ့အဖွဈကို ပရိသတျကိုဖောကျသညျခခြဲ့ပါတယျ။ ရှနျးရှနျးနဲ့အပွနျအလှနျ စကားပွောဖွဈခဲ့ပုံကို ” အမကွီး ဘယျသှားမလို့လဲ ???? (Shooting သှားမလို့) မငျးသားကဘယျသူနဲ့တှဲမှာလဲ ???? ( နတေိုး …
မွနျမာနိုငျငံ၏ အကြျောကွားဆုံးထဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ပငျးတယ လှိုဏျဂူ၏ အံ့ဖှယျ ထူးခွားခကျြမြား
စာမကျြနှာမြားပျေါမြားတှငျထငျရှားဖျောပွခဲ့သညျ့ ပငျးတယဂူသညျရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ပငျးတယမွို့တှငျတညျရှိသညျ။ ပငျးတယဂူသညျ ထုံးကြောကျတောငျတှငျ သဘာဝအတိုငျးဖွဈပျေါနသေောကွောငျ့ ဘူမိဗဒေသကျတမျးနှငျ့ ဆိုလငျြ လှနျခဲ့သော နှဈ သနျး ၂၀၀ တညျးက ရှိခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။မွငျ့မားတဲ့ တောငျစောငျးကနေ တောငျမွောကျ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ဂူ သုံး ဂူ ရှိတယျလို့ဆိုပမေဲ့ တောငျဘကျ အကဆြုံး ဂူတဈခုသာ ၀ငျရောကျနိုငျတယျလို့ဆိုသညျ။ ဂူဟာ ပေ ၄၉၀ ထိ ၀ငျရောကျနိုငျပွီး …
မွေးနေ့အကြိုအနေနဲ့ ရွာမှာ အလှူပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့ နေဆန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ နေဆန်းကတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို တင်ဆက်ရင်းကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိအချိန်မျာတော့ နေဆန်းကအောင်မြင်မှုတွေတော်တော်လေးကိုလည်း ရရှိနေတဲ့ သူတစ် ယောက်ဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာတွေကိုပါရိုက်ကူးနေနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ နေဆန်းက မကြာခင်မှာကျရောက်လာမယ့် သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးအတွက် မွေးနေ့အကြိုအနေနဲ့ ဇာတိဖြစ်တဲ့ ရွာ လေးမှာ အလှူကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ ရွာမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ အာဟာရဒါနကျွေးမွေးခဲ့ပြီး လူကြီးတွေအတွက်တော့ …
“နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အူတိုသွားလောက်စေမယ့် ပိုင်တံခွန်နဲ့အတူတူ ရိုက်ကွင်းပေါ်က အမှတ်တရလေးတွေကို ချပြလာတဲ့ ပိုပို”
ပရိသတ်ကြီးရေ သီချင်းကောင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူ အဆိုတော် ပိုပိုကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ပိုပိုကတော့ သီချင်းကောင်းတွေကို ဖန်တီးသီဆိုရင်း သူမရဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ သီချင်းအသစ်အကောင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ ချပြဖို့ ကြိုးစားနေသူ ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့ နောက်ထပ် ထွက်ရှိမယ့် အရိပ်ကလေးလို သီချင်းရဲ့ Music …
ဟေတုပစ္စယော တစ်လုံး တည်းဖြင့် ဘဝကူးကောင်း ခဲ့သူ
မိုးညှင်းဆရာတော်ကြီးကျောင်းကို ဥပုသ်စောင့်လာ တဲ့ အထဲက စာမတတ် ပေမတတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အဖွားအိုကြီးတစ်ယောက်က ဆရာတော်ကြီးကို ပုတီးစိပ်သင်ပေးဖို့ လျှောက်ထားသတဲ့— ဒီတော့ ဆရာတော်ကြီး က အဖွားကြီး စာကလည်း မတတ် ဉာဏ်ကလည်း ထိုင်းမယ့်ပုံဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေတော့ဘူး “ဟေတုပစ္စယော စိပ်” လို့ မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါသတဲ့ အဲဒီအခါ အဖွားကြီးအိုက အချိန်ရှိသမျှ “ဟေတုပစ္စယော ဟေတုပစ္စယော” …
ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးများနဲ့ စွန့်ပစ်ခံကလေးများအတွက်နေဖို့ အိမ်ကလေးစတင်ဆောက်လုပ်နေပြီဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပရဟိတအလုပ်တွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေလဲ အပါအဝင်ပါပဲ။လိုအပ်နေတဲ့ အခြေခံလူတန်းစား တွေအတွက် လှူဒါန်းရုံတင်မကဘဲ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်ပြီး မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ အနုပ ညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။လတ်တလောမှာတော့ သူမက ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးများနဲ့ စွန့်ပစ်ခံ ကလေး‌တွေအတွက် အရိပ်လေး တခုစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေ အရိပ်တခုရဖို့၊ လူဖြစ်ဖို့အတွက် …
ထားတဲ့ ဦးခဈြစရာနဲ့အတူ ကွျောငွာရိုကျကူးခှငျ့ရတဲ့အတှကျ ပြျောနတေဲ့ ဖွူဖွူထှေး
ဖွူဖွူထှေးကတော့ ဒုတိယထကျထကျမိုးဦးလို့ ဆိုရလောကျအောငျ ကွျောငွာတှရေိုကျကူးနရေတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ။ ကွျောငွာတှကေို ကိုယျတိုငျအိုငျဒီယာနဲ့ ဇာတျညှနျးရေးပွီး ဖုနျးနဲ့ပဲရိုကျကူးလရှေိ့ပမေယျ့ ဟာသ၊ရသ အစုံ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျလေးတှနေဲ့ ဖနျတီးထားတဲ့ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ကွျောငွာတှကေိုတော့ တဈရကျအတှငျး ကွညျ့ရှုသူ အနညျးဆုံးသိနျးငါးဆယျလောကျ ရှိလာတဲ့အထိ အောငျမွငျမှုရရှိနတောပါ။ သူ့ရဲ့ကွျောငွာတှမှောလညျး ခကျခဲနတေဲ့ ဇာတျပို့ဇာတျရံသရုပျဆောငျတှကေို ထညျ့သုံးလရှေိ့တဲ့အပွငျ ရိုကျကူးရေးပွီးတိုငျးလညျး ဂါရဝတရားရှထေ့ားပွီး စီနီယာအနုပညာရှငျတှကေို ကနျတော့လရှေိ့သူပါ။ မနကေ့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာ မြှဝခေဲ့တဲ့ …
Previous 1 … 747 748 749 … 860 Next